Amazonie extrême : Feno Fasika Sy Maty Noho Ny Jono Tafahoatra Ny Rio Tapajós · Global Voices teny Malagasy
Amazonie extrême : Feno Fasika Sy Maty Noho Ny Jono Tafahoatra Ny Rio Tapajós
Voadika ny 16 Marsa 2016 3:12 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Nederlands, Português
Haintany manjo ny faritra Santarém sy Alter do Chão. Sary : Flávio Forner/Infoamazonia
Ity no fahefatra (sady farany) amin'ny fanadihadiana momba ny “Amazonie extrême” (lahatsoratr'i Camila Fróis ary sary an'i Flávio Forner) notontosain'ny InfoAmazônia, navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanekena fifampizaràna votoaty. Vakio ato ny ampahany voalohany, ny faharoa ary ny fahatelo.
Teraka sy lehibe tao Jamaraquá i Edinelson Fonseca, 62 taona. Mitorevaka eo amin'ny torapasika, manopy ny masony ery amin'ny ony lavitra ery izy no sady mitanisa ny tantaran'ny lasa fony vanimpotoana naha-tonitony kokoa ny hafanàna, nilonjehitry ny voa ireo hazo ary feno trondro nifanenjika ireo renirano :
“Ankehitriny, maty ao anaty farihy ao ny trondro satria mafàna loatra ny rano. Ary raha te-hanjono ato amin'ny farihy, dia ny maraina tontolo no ho laninao vao mba mahazo ‘gardon’ iray ianao….na ny ratsy indrindra, tsy mahazo na inona na inona. Misy sambo vaventy tonga avy any Belem ary mifaoka ny zavatra rehetra. Harato kely masony no ampiasain-dry zareo ary mifaoka izay rehetra manoloana azy”, hoy i Edinelson manazava amintsika. Mitovy hatrany ny fitantaràna any anatin'ireo vondrom-piarahamonina rehetra any, sarinà ala iray mirehitra sy miala aina miaraka amin'ireo renirano miha-ritra no omen-dry zareo Ho an'i Antônio Nobre, tonga ny fotoana hihetsehana, hirosoana amin'ny ady mba hiarovana ilay toerana isafatsiroa ary tsy azo soloina izay nandanian'ny tany 50 tapitrisa taona ny nanamboarana azy.
Faritra arovana roa no tetezin'ny Rio Tapajós : ny àlam-pirenena'i Tapajós sy ny tahirin'ny fitrandrahana ao Tapajós-Arapinus, izay hita ery ampita, saingy tsy mahazo fiarovana manokana na dia kely aza.
ìo tsy fisian'ny fiarovana io no mahatonga ny jono ara-barotra goavana ho afaka atao ao, ahafahan'ireo sambo vaventy misy vata fampangatsiahana mitatitra trondro hatramin'ny 30 taonina. ìo, hoy ireo mponina eny imorony, no mahatonga ny trondro ho tsy hisy firy intsony. Maro tamin'izy ireo no niala tamin'ny fanjonoana ary lasa mividy ny hanina hohaniny eny an-tsena any an-tanàndehibe. Ho an'i Patrícia Pinho, matetika ankehitriny no ahitàna ao amin'ny faritra ny fanoloana ny trondro amin'ny akoho ratsy kalitao avy any anaty vata fampangatsiahana mba ho sakafo, miaraka amin'izay loza mitatao ateraky ny aretina noho ny fahatapahan'ny tsingerin'ny fampangatsiahana any anatin'ireny vondrom-piarahamonina kely tsy manana herinaratra azony raisina ireny.
Koa satria tsy voaaro ny ony, tsy ara-dalàna ny asan'ireo sambo vaventy misy vata fampangatsiahana. Ny olana, hoy ireto mponina manodidina, dia ireny sambo avy any Belem sy toerana hafa ireny mampiasa ny ‘chalutage’ isintonana harato eo anelanelan'ny sambo roa ary mitety ny ony mandroaka izay trondro rehetra tsy ifidianany izay habeny, nefa io dia efa hatramin'ny 1994 no voaràra ao amin'ny Fanjakan'i Pará.